Zvese zvauchazombofanira Kuziva Nezve "Best Nguva" | Martech Zone
Svondo, June 28, 2015 Svondo, June 28, 2015 Douglas Karr
Kana ndisina kumbogovana imwe yakanakisa nguva infographic, Ndichafara kuti uku ndiko kwekupedzisira. Uye ini ndinovimba chaizvo kuti iwe unogovanawo futi. Ini ndinogomera chose pese pandinoona a nguva yakanakisa yeku infographic. Nguva yakanakisa yekuTwitter. Yakanakisa nguva yekuvandudza pane Facebook. Nguva yakanakisa yekutumira email. Nguva yakanakisa yekuvandudza LinkedIn. Nguva yakanakisa yeku blog. Argh… zvinondifambisa chaizvo kupenga.
Chero apo mumwe munhu paanogovana imwe yeaya infographics, ini ndinocherekedza kusarudzika kwavanoita ivo uye zviri kutendeseka zvinoshungurudza. Asi ipapo ini ndinotarisa kumabhizimusi 'kana nguva dzevanhu dzakagovana uye ivo havana kana kushambadzira chero chinhu. Usatarise kune zvinoitwa nevamwe vese, teerera kune vateereri vako nenharaunda vanopindura sei, vanogovana, vanoita uye vanotendeuka. Tarisa yako analytics - uye nyatsoteerera kumatunhu enguva sezvaunofunga kana nguva dzakaringana dziripo.
Ini ndinofunga inguva yakanakisa kutsikisa? Pakarepo mushure mekupedza kunyora. Ndirini pandinofunga nguva yakanakisa yekugadzirisa vezvenhau? Paunenge uine nguva uye uine chimwe chinhu chakakosha kugovera. Kutevera kwedu kuri kuramba kuchikura uye kushambadzira kwedu kune maviri-manhamba ekukura kunyangwe yedu purogiramu yekutsikisa.
Zvakakomba ... uyu ndiwo mujaho, kwete danho remakumbo. Tsika pane gasi uye gadzira zvakanaka mota sezvaunoenda. Iyo mota inokunda mujaho haisi pakati pepakiti, iri kunze mukutungamira.
Tags: nguva yakanakisayakanakisa nguva infographicnguva yakanakisa yekunguva yakanakisa yekutumiranguva yakanakisa yekutsikisanguva yakanakisa yekutumira emailyakanakisa nguva ye tweetnguva yakanakisa yekuvandudza facebooknguva yakanakisa yekugadzirisa linkedin